China Umgangatho oPhezulu weNcama yeTomato yokuDibanisa umzi-mveliso woMatshini kunye nabavelisi |TSIBA
UmGangatho oPhakamileyo weNcama yeTomato yokuDinga
Iinjineli ezifumanekayo zokunikezela ngenkonzo koomatshini phesheya
umatshini wokudibanisa intlama yetumato
ukwakha ukutya & nesityalo sokusela
I-SUS 304 intsimbi engatyiwayo
I-2 ukuya kwi-50 yeetoni / umthamo wonyango weyure njengoko umthengi efuna
50 Iqhekeza / Amaqhekeza ngonyaka umatshini wokudibanisa itomato incama
I-Shanghai JUMP Machinery & Technology Co., Ltd (emva koku ebizwa ngokuba yi-SHJUMP) lishishini langoku elinobugcisa obuphezulu obuhlangeneyo, kwaye ligxile kwisosi yetumata, ijam yejusi yeziqhamo, ukusetyenzwa kweziqhamo ezishushu, ukuzalisa iziselo zejusi yeziqhamo ezishushu, iziselo zeti, ukusetyenzwa kweemveliso zobisi kunye nezinye izixhobo zesityalo siphela uphando kunye nophuhliso, uyilo, ukuvelisa kunye neeprojekthi turnkey.I-SHJUMP ineminyaka engaphezu kwama-40 yamava azizityebi kunye namandla obugcisa kumashishini oomatshini bokutya, kwaye iseke ngempumelelo ngaphezulu kwe-110 umgca wemveliso yejusi yeziqhamo ekhaya nakwamanye amazwe.I-SHJUMP ineqela leenkosi kunye noogqirha abaphambili kubunjineli bokutya kunye noomatshini bokupakisha, bexhotyiswe ngokupheleleyo ngoyilo lweprojekthi yomgca kunye nophuhliso, ukuvelisa, ukufakwa kunye nokugunyazisa, uqeqesho lobugcisa kunye nenkonzo yokuthengisa emva kwenkonzo, kunye neminye imiba yezakhono ezihlanganisiweyo.
Singacebisa umthengi owona matshini ufanelekileyo ngokwefomula yabo kunye neMathiriyeli eRaw."Uyilo kunye nophuhliso", "ukuvelisa", "ufakelo kunye nokugunyaziswa", "uqeqesho lobugcisa" kunye "nenkonzo emva kokuthengisa".Singakwazisa umthengisi wemathiriyeli ekrwada, iibhotile, iilebhile njl.njl. Siyakwamkela kwiworkshop yethu yemveliso ukuze ufunde ukuba injineli yethu ivelisa njani.Sinokwenza ngokwezifiso oomatshini ngokwemfuno yakho yokwenyani, kwaye sinokuthumela injineli yethu kumzi-mveliso wakho ukuba ifake oomatshini kwaye iqeqeshe umsebenzi wakho wokuSebenza kunye nokugcinwa.Naziphi na ezinye izicelo.Sazise nje.
I-6.Iinkonzo zeSoftware kunye neengcebiso: Ukuze uvumele abasebenzi bakho bezobugcisa ukuba babe nokuqonda ngakumbi kwiingcebiso ezinxulumene nezixhobo, ndiya kulungiselela ukuthumela izixhobo ezithunyelwa rhoqo kwi-advisory kunye nemagazini yolwazi lwamva nje.
Ngaphambili: I-1000 yeLitha yeTanki yokupholisa yobisi ye-Soya UHT yoMda wokuLungisa ubisi
Okulandelayo: Uxinzelelo lweNkunkuma yezoNyango loMbane loMphunga weAutoclave Sterilizer
Ukubuyiswa koomatshini bokuvala inzala
I-Automatic Chocolate Candy Depositing Production...
Uxinzelelo lweNkunkuma yezoNyango loMbane Umphunga weAutoclave...
IFomu yokuNyibilikisa yeTshokholethi eZizenzekelayo...